साउदी अरबमा कामको अवसर २ फरक कम्पनी ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
साउदी अरबमा कामको अवसर २ फरक कम्पनी !
हाल साउदी अरबका दुई कम्पनीले नेपाली कामदार खोजिरहेका छन् । अल एन्जाज ट्रेडिङ एण्ड कन्ट्र्याक्टिङ कम्पनी गोल्डेन वर्ल्ड कन्ट्र्याक्टिङ EST को कम्पनीको नाम हो। हामी हाल जनरल प्लम्बर, जनरल इलेक्ट्रीशियन, जनरल मेसन, ड्रेन्च ड्राइभर, बुलडोजर ड्राइभर, लेभलिङ मेकानिज्म ड्राइभर, र ट्रक ड्राइभरहरू सहित विभिन्न जागिरका लागि भर्ती गरिरहेका छौं। कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई धेरै सुविधाहरु उपलब्ध गराएको छ ।
उनीहरू आफ्ना कामदार/कर्मचारीहरूलाई बहुमूल्य स्रोतको रूपमा मान्छन्। यसैले उनीहरूले कामदारहरूको कामको बाटोबाट सबै अवरोधहरू हटाउँछन्। उल्लेखित पदको लागि, कम्पनीले राम्रो तलब प्रस्ताव गर्नेछ। यस कम्पनीमा नेपालबाट पनि धेरै कर्मचारी कार्यरत छन् । हप्ताको6दिन र दिनको 8 घण्टा काम गर्ने घण्टा हो।
थप रूपमा, त्यहाँ ओभरटाइम काम गर्ने विकल्प छ, तर घण्टा कम्पनीको नियम र नियमहरू अनुसार सेट गरिनेछ। कम्पनीले कामदारहरूलाई उचित खाना/खाना र बस्नको लागि कुनै शुल्क बिना उपलब्ध गराउँछ। कम्पनीले आफ्नो नियम र नियम अनुसार वार्षिक बिदाहरू निर्धारण गर्दछ र अनुदान दिन्छ। यो स्थिति दुई वर्षको लागि मात्र रहन्छ। एक पटक आवेदन अवधि सकिएपछि, उम्मेदवारहरूले चाहानुहुन्छ भने अर्को वर्षको लागि आवेदन दिन सक्छन्।